नेकपामा ओली–प्रचण्डको विवाद : अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला ?
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको प्रयास जारी छ ।
मंगलवार बिहानै अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटार पुगे ।
उनले यतिबेला २ अध्यक्षबीच नै सहमतिको खाँचो रहेको भन्दै प्रचण्डलाई ओलीसँग छलफल गर्न आग्रह गरे ।
‘यतिबेला अन्य बैठक–भेलाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सहमति गरेर सचिवालय बैठक बोलाउन आवश्यक छ,’ पोखरेलको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘ओली कमरेडको पनि यही धारणा छ । तपाईंहरू मिल्दा पार्टी अघि बढ्छ । तपाईंहरूबीच संवादहीनता बढ्यो भने एकताविरोधी क्रियाकलापहरू बढ्छन् ।’
जवाफमा प्रचण्डले आफू एक्लै बालुवाटार जानुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘उहाँ (ओली) व्यक्तिगत रूपमै अपमानको तहमा ओर्लिनुभएको छ । जे जति विवाद छ, सचिवालय बैठकले नै हल गर्छ । त्यो भन्दा दायाँबायाँ म हुन्न,’ प्रचण्डको जवाफ थियो यो ।
जवाफमा पोखरेलले सचिवालय बैठक बोलाउन ओली पनि तयार रहेको तर त्यसका लागि अध्यक्षद्वयबीच परामर्श हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई मनाउन सोमवार महासचिव विष्णु पौडेल पनि खुमलटार पुगेका थिए । तर सोमवार पनि प्रचण्डले एक्लाएक्लै छलफलको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै पौडेललाई फर्काइदिए ।
मंगलवार ४ बजे बहुमत सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक बैठक बस्ने तयारी रहेको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्डले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खबर पठाइसकेका छन् ।
यसअघि गत शुक्रवार र शनिवार पनि ५ जना सचिवालय सदस्यहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेका थिए । उक्त अनौपचारिक भेलापछि सचिवालय बैठक बस्न माग गर्दै ओलीलाई २ पृष्ठ लामो पत्रसमेत बुझाइएको थियो ।
मौखिक रूपमा २ दिनको अल्टिमेटम दिइएको भनिएतापनि आइतवार र सोमवार बैठक बस्न सकेन । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक नै नबस्ने स्थितिमा आफूहरूले के गर्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेको लोकान्तरलाई बताए ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बस्ने विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै कसैले माग गरेकै आधारमा बस्न बाध्य नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिबाट असन्तुष्ट पक्ष अझ बढी रुष्ट भएको छ ।
ओली र प्रचण्डबीच गत कात्तिक २० गते यता एक्लाएक्लै भेटघाट भएको छैन । २० गते बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा ओली र प्रचण्ड दुवैले एकले अर्कालाई ‘जाली र महाजाली’ भन्दै बाझाबाझ गरेका थिए । प्रचण्डले त्यतिबेलै सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीसँग माग गरेपनि ओलीले ‘मलाई अप्ठ्यारो पार्ने बैठक किन बोलाउने ?’ भनेका थिए ।
ओलीले कुनै पनि हालतमा बैठक बोलाउन नमानेपछि ५ जना सचिवालय सदस्य पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भेला भएका हुन् । ओलीले त्यसलाई गुटगत भेलाको संज्ञा दिएका थिए ।
पार्टीभित्र अराजकता बढेको भन्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृतकुमार बोहोराले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अबिलम्ब बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिने पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २ साताभित्र प्रधानमन्त्रीमाथि कारवाही गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी रहेको सन्देश दिने सांकेतिक ट्वीट गरेका छन् ।
उनले मंगलवार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘जिम्वाल बाका छिमेकीले भनेको – दुई साताभित्र प्रधानमन्त्रीमाथि पानी पिउन पनि नपाउने गरी खतरा कारवाही गर्ने तयारी छ रे ! भर्खरै सुनाए । पत्यार नलागे पनि प्रतिक्षा त गर्नु पर्यो अब ।’ उनले रमाइलो पारामा यो ट्वीट गरेपनि यसले दिने अर्थ भने गम्भीर रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि कारवाही गर्ने तयारी हो र भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘चील आएको हल्ला चलाएर कुखुरा टिप्ने स्यालको दाउ हो । यस्ता कुरामाथि टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले ‘अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला’ जस्ता निरर्थक विवाद गरेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका उनको आरोप छ ।
पार्टी विवाद के हुँदैछ भनेर आफूलाई दिनदिनै डेढ दुई सय फोन आउन थालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन् ।
'पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट भनिरहेका छौं,' गैरेले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । दिनमा डेढ दुई सय जनाले फोन गरेर के हुँदैछ भनेर सोधिरहन्छन् । त्यो फोन आउन बन्द भए हामीलाई पुग्यो ।'
उनले सहमति पहिला कि बैठक पहिला भन्ने प्रश्न कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला जस्तो भएको बताए । 'यस्तो प्रश्नमा अल्झिने नेताहरूले पार्टी र देश कसरी चलाउने हो ?' उनको प्रश्न छ ।
विवाद समाधानका निम्ति गत साउनको अन्तिममा गठन गरिएको कार्यदल (अहिले विघटित) का सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्ने महासचिव पौडेलको प्रयास पनि असफल भएको छ ।
सोमवार उनले कार्यदलमा रहेका सबै सदस्यलाई बालुवाटार डाकेका थिए । तर पूर्व माओवादी पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा नआएपछि बालुवाटारमा भेला भएका महासचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री पोखरेल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे चिया पिएर फर्केका थिए ।
पूर्व माओवादी पक्षले विघटित कार्यदलको अहिले कुनै काम नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘त्यही कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको थियो,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे सकियो । किन थप बखेडा झिक्नुपर्‍यो ?’